Global Voices teny Malagasy » Orogoay: Resabe Momba Ny Fandavahana Lavaka Tafo Lanitra Ho Fitrandrahana Akoram-by Ambanin’ny Tany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Jolay 2011 6:43 GMT 1	 · Mpanoratra Silvia Viñas Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Amerika Latina, Orogoay, Fanoherana, Toekarena sy Fandraharahàna, Tontolo_iainana
Tetikasa iray hanaovana lavaka hitrandrahana akoram-by ambanin'ny tany ao Centro Chato  – tanàna kely iray misy mponina miisa 3,144 arivo araka ny fanisam-bahoaka taona 2000  [es] – ao afovoan'i Orogoay no mampizarazara ny Orogoaiana. Ny hafa mahita izany ho fanararaotra mba hananana asa sy hampitomboana ny toe-karena, ny sasany sahiran-kevitra momba ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana ary velom-panontaniana raha tena hahazo tombotsoa marina tokoa avy amin'ilay fitrandrahana ny firenena.
Araka ny notaterin'ny AFP  tamin'ny fiandohan'ny volana Jona:
Ny tetikasa Aratiri, an'i Zamin Ferrous, orinasam-pitrandrahana harena an-kibon'ny tany iray izay any Londona no foibeny, izay mitetim-bidy eo ho eo amin'ny 2,5 arivo tapitrisa dolara (1,7 tapitrisa Euro), tetikasa lehibe indrindra hatreto any Amerika Atsimo, mitovy amin'ny enina isan-jato maherin'ny harin-karena faobe anatiny ao Orogoay.
Ho an'ny roa taona lasa, nahazo alàlana nanao fitsirihana vy tamin'ny 120,000 hektara (460 metatra tora-droa) amin'ny tany manodidina ny tanànan'i Cerro Chato any afovoany-atsinanan'ny firenena ilay orinasa.
Manampy ilay tatitra:
Ny fanjakana no tompon'ny any ambanin'ny tany any Orogoay, ary izy no niteny ireo tantsaha hamela ilay orinasa hampiasa ny tanin'izy ireo hitrandrahana akoram-by.
Tamin'ny tambiny faran'izay kely, Claudia Perugorria dia nanome alàlana milina ny fandavàhan'ilay orinasam-pitrandrahana ho eo amin'ny taniny mirefy 47 hekitara (116 ara), izay iompiany ondry sy omby vavy 30 eo ho eo. Ankehitriny, ny kijanan'ombiny dia rakotra dian-kodiarana sy lavaka izay mety mamingana ireo biby ka handratra azy ireny.
Fiaraha-mamindra ho fanoherana ny Aratiri, ny 15 May 2011. Sary avy amin'ilay Gonzak mpampiasa Flickr, Gonzalo Useta , (CC BY-NC-ND 2.0)
El Pueblo Frente a la Minera Aratiri (Ny vahoaka manohitra ny Toeram-pitrandrahana ao Aratiri ) [es], bilaogy iray manohitra ny orinasa sy nandefa lahatsoratra, tatitra, ary fampahalalana hafa momba ny tetikasa, miteny hoe:.
Satria mampiasa loha ireo Orogoaianina ny fampandrosoana, ny momba ny tontolo iainana sy ny fahasalamana ary ny zon'ny vahoaka haneho ny heviny sy handray anjara amin'ny fanampahan-kevitra, izay miantraika nivantana amin'ny fiainany sy ny fivelomany, manontany tena isika hoe: ‘Ahoana no hampifanindran-dàlana ilay hoe “Orogoay Natoraly” dradrain'ny fitondram-panjakana hiaraka aminà tetikasam-pitrandrahana manana habe toy ity, lehibe hatraiza ny tombotsoa ara-toekarenan'ny firenentsika raha lanjalanjaina ny tontolo iainana tsy ho voaverina amin'ny laoniny sy ny fihasimbana ara-tsosialy? Inona no hitrangaeto amin'ny tanàna raha mihemotra tampoka ilay orinasa? Tafiditra ao anatin'ny kajikajy ve izany?
Ireo mpanohana ilay tetikasa dia mitanisa ny fandrosoana ara-toekarena ho azon'ny tanàna ho iray amin'ny herin'ny tetikasa. Felix Obes Fleurquin ao amin'ny Equinox Fin de Semana  [es] manoratra hoe:
Makasitraka io tetikasa io aho, sy ny karazana tetikasa rehetra hanafaka antsika amin'ny fahantrana […]
Maro ny loza mety ateraky ny lavaka fitrandrahana, tsy azo lavina izany, tahaka ny amin'ny milina fanodinana taratasy, nefa tsy maintsy atrehana ireny loza ireny[…]
Ny Alahady 26 Jona, nilahatra nanohitra ilay tetikasa ireo tantsaha sy ireo manodidina an'i Cerro Chato. Ny bilaogy Observatorio Minero del Uruguay  [es] manazava fa ny ankamaroan'ny mpanao fihetsiketsehana:
dia miaina sy miasa ao amin'ny 120,000 hektara izay nalain'ilay orinasa ho amin'ny fitrandrahana ary, noho izany, niatrika fahasarotana amin'ny famolavolana ny hoavin'ny asa eny ambanivohitra.
Ny andro talohan'izay, ny Asabotsy 25 Jona, ny mpiasa sy ireo hafa mpanohana ny Aratirí no nilahatra tamin'izany làlana izany koa niaro ilay tetikasa. Ny bilaogy Aire Libre [es] dia mizara feo sy sarin'ny fihetsiketsehana roa tonta
Mpampiasa Twitter maro maneho hevitra momba ny Aratirí izay no toa manohitra ny tetikasa, na izany aza misy ny vitsivitsy maningana , toy ny mpampiasa @Uruguay_Mejor , izay nanoratra hoe:
En principio, estoy a favor del puente #LagunaGarzon , de #Aratirí  y del desarrollo del #Orogoay . También quiero mayor control de DINAMA…[Dirección Nacional del Medio Ambiente]
Amin'ny ankapobeny; Izaho dia makasitraka ny tetezana #LagunaGarzon  , ny #Aratirí  sy ny fampandrosoana an'ny #Uruguay . Izaho koa dia maniry mafy ny fifehezana matotra ny DINAMA…[Foibem-pirenena momba ny fitantanana ny tontolo iainana]
"Tsy hivarotra ny harem-pirenen'ny mpanana 'tantsinana' aho", José Artigas. Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr Frente Aratiri (CC BY-SA 2.0).
Fa ny mpanao gazety, mpisolo vava sy mpanoratra Graziano Pascale(@grazianopascale ) dia mizara ny ahiahin'ny besinimaro:
@MBBATLLISTA  // los extranjeros cada vez msas ricos con el hierro uruguayo
@MBBATLLISTA  // ireo vahiny no miha manan-karena amin'ny harena an-kibon'ny tany Orogoaianina
Nitoraka  koa izy taty afara [es]:
N'iza n'iza mitantana ny harena an-kibon'ny tany dia mitantana an'i Orogoay.. Aratiri dia ho firenena anaty firenena amin'ny fitantanany 3 tapitrisa dolara isan-taona.
Ricardo Berois (@rberois ) manao tsilian-tsofina amin'ny fanambaran'ny Filoha José Mujica  amin'ny fisian'ny orinasa faharoa avy any Aostralia – ny Gladiator Resources  (Ferro Minas S.A. in Uruguay), izay mikasa ny hitrandraka akoram-by ao amin'ny Rivera :
Mujica milaza fa misy orinasa iray hafa ankoatry ny Aratirí! Raha izany ndeha ho raisina ho fanananm-pirenena ny fitrandrahana akoram-by anaty tany raha vola be tokoa no tadiavintsika araka ny teniny
Marcelo Bacigalupi (@Cr_Bacigalupi ) manoratra hoe:
Tsy mamokatra ny adihevitra momba an'i Aratiri. Tsy maintsy sakanana ny fanaovana lavaka tafo lanitra. Tsy maintsy arovana ny tontolo iainana. Ao an-dohantsika fotsiny ihany ny vola.
Amin'ny YouTube, noalamegamineriaUR  (tsia amin'ny fitrandrahana an'i Orogoay) [es] mampakatra lahatsary izay mampahafantatra ny momba ny vokatry ny tetikasa toy ny Aratirí ary koa mampiseho ny diabe manohitra ny fitrandrahana ny harena an-kibon'ny tany:
Ny gazety Orogoaiana El Observador  [es] mitatitra fa ny fandinihana ny mety ho fihatraikan'ny tetikasa Aratiri amin'ny tontolo iainana dia hatao afaka 18 volana. Hatramin'izao aloha zany, dia afaka manantena hitohizan'ny fifampiresahana eny an-arabe sy ny tambajotra sosialy isika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/07/13/19131/
 ny fanisam-bahoaka taona 2000: http://www.elpais.com.uy/110429/pnacio-563128/nacional/Comerciantes-de-Cerro-Chato-hacen-sonar-su-campana-a-favor-de-Aratiri/
 El Pueblo Frente a la Minera Aratiri : http://aratiri.wordpress.com/about/informarse/el-proyecto-de-aratiri-en-uruguay/
 Equinox Fin de Semana: http://findesemana.blogspot.com/2011/06/aratiri-mi-opinion-personal.html
 Observatorio Minero del Uruguay: http://www.observatorio-minero-del-uruguay.com/2011/06/ni-chatos-ni-dinamiteros/
 Aire Libre : http://airelibre33.blogspot.com/2011/06/cerro-chato-se-movilizo-favor-y-en.html
 Filoha José Mujica: http://en.wikipedia.org/wiki/Pepe_Mujica
 Gladiator Resources: http://www.gladiatorresources.com.au/investor-information/project-overview/
 El Observador: http://www.elobservador.com.uy/noticia/204406/estudios-de-impacto-ambiental-sobre-aratiri-estaran-dentro-de-18-meses-/